छाडी गयाै हामीलार्इ, जीवनकाे याे माेडमा
निभेको एउटा दीप........फेरी बल्ने प्रयासमा ।
छाडी गयौं हामीलाई, जीवनको यो मोडमा
सम्झना भई बिलायौ, हावासँगै उडी गयौ
याद मात्र अब रह्यो......।।
२०६७ साल भदौ २३ गतेको अबेर राती एउटा खम्बा गर्लम्म ढल्यो काठमाण्डौको पशुपति वैद्यखानामा । जण्डिस लगायत अन्य रोगले छिया छिया बनाएको सल्लेरी ७ का चन्द्रनारायण श्रेष्ठको शरिरले सन्सार छाड्दा थुप्रैले आँशु झारे, मन दुखाए । काठमाण्डौमा करिब २ महिनाको उपचार पछि त्यो शरिर सबैलाई रुवाउँदै विदा भएको थियो ।
स्व. चन्द्रनारायण श्रेष्ठको जन्म वि.सं. १९९८ जेठ ९ गते सोलुखुम्बुको सल्लेरी ७ दोर्पू बजारको चउरघरमा भएको थियो । ७० बर्षको आफ्नो जीवन स्व. श्रेष्ठले सम्पूर्ण रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा नै समर्पण गरे । सल्लेरीको दोर्पू प्राथमिक विद्यालय छुल्यामुमा वि.सं. २०१९÷२० साल तिर विद्यार्थी पढाउने कामवाट शुरु भएको थियो वहाको शैक्षिक यात्रा । एक सुका पैसा नलिई श्रेष्ठले दोर्पू प्रा.वि.मा झण्डै ३ बर्ष बिताए ।
सँगैका दौतरीहरु २०२२÷२३ साल तिर धेरै लाहुर हान्निए, काठमाण्डौ गए, घर छाडेर धन कमाउन गए । जति जे गर्न सकिन्छ, आफ्नै गाउँ ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने दृढता बोकेका स्व. श्रेष्ठको मन पनि मानेन त्यतिखेर । अरुकै लहलहैमा लागेर २३ सालमा उनी पनि हान्निए इण्डिया तिर । केही धन कमाउन सकिन्छ की भनेर त्यता हान्निएका श्रेष्ठको मन पराई भूमिमा के टिक्थ्यो र एक बर्ष पनि पराई भूमिमा नबसी फेरी घरै फर्किए श्रेष्ठ अनि दोहो¥याए त्यही पुरानो काम केटा केटी पढाउने, त्यो पनि पैसा नलिई ।
घरघरमा पुगेर पढाउने क्रम जारी रह्यो अनि जीवनमा उतारचढाव पनि । एक सुका पैसा नलिई अरुलाई पढाउँदा पनि पढ्नेहरुको अविभावकवाट कैयौं पटक गाली खानु प¥यो उनले । “वस्तु चराउने केटाकेटीलाई पढाएर बिगार्ने भो” त्यस बेला अविभावकहरुले भनेका थिए । त्यस्तै भनाईले पटक पटक स्व. श्रेष्ठमा विचनल पनि आयो । २०२५ सालमा गाउँमा ६ रुपैयामा खसी किनेर काठमाण्डौ लगेर बेच्न तम्सिए । लगातार २१ दिनको हिडाई पछि काठमाण्डौ पुगेर घण्टाघर मुनी बसेर एक हप्ता लगाएर सबै खसी बेचे उनले । गाउँमा प्रतिगोटा ६ रुपैयामा किनेको खसी काठमाण्डौ पु¥याएर प्रतिगोटा १४ रुपैयामा बेचेका थिए रे उनले त्यतीखेर । दाम त राम्रै आयो तर खसीसँग काठमाण्डौ पुग्न २१ दिन अनि फर्कन झण्डै १५ दिन । घरवाट लामो समय टाढा बसेर काम गर्नु भन्दा बरु अविभावकहरुको गाली खाएर केटाकेटी पढाउन नै बेस भन्ठानेर फेरी उनले निरन्तरता दिए पढाउने कामलाई तर घर घरमा होइन सल्लेरीकै ज्याल्सामा ।
२०२६ सालको अन्त्य तिर पढाउनकै लागि उनी ज्याल्सा तिर हान्निएका थिए उनी । “तितेपाती र बनमाराले बेरेर पढाउथ्यौं हामी, घाँसको डस्ना हुन्थ्यो भूईमा” जिवित हुँदा वृत्तान्त सुनाउँदै उनले मलाई भनेका थिए । तिब्बतियन शरणार्थीहरुलाई पढाउने काम गरे उनले त्यँहा । ज्याल्सा (हालको च्याल्सा) मा हजारौं शरणार्थीहरुलाई अक्षर चिनाउने र ज्ञानको ज्योति बाड्ने काम गर्ने क्रममा ज्याल्सामा शेर्पा र टिबेटियनहरुको संगतले श्रेष्ठ टिबेटियन भाषा बोल्नमा माहिर बनेका थिए । “मलाई नेपाली बाहेक टिबेटियन र शेर्पा भाषामा कसैले ढाट्न सक्तैन, तामाङ र अंग्रेजी भाषा पनि पो ठिकै बोल्छु” उनी भन्थे ।
ज्याल्सा छाडे पछि स्व. श्रेष्ठले सचिव भएर पनि काम गरे । तत्कालिन सल्लेरी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको सचिवका रुपमा २०३१ साल चैत्र १ गतेदेखि २०३४ साल श्रावण ३२ गतेसम्म इमान्दारी पूर्वक जनताको सेवा गरेको भन्दै तत्कालिन गाउँ पञ्चायतवाट स्व. श्रेष्ठ सम्मानित र पुरस्कृत समेत भएका थिए । गाउँ पञ्चायतको सचिवको रुपमा काम गर्दा पनि स्व. श्रेष्ठले गाउँलेको सेवाका साथमा गाउँका केटाकेटीलाई जम्मा गरेर पढाउने क्रम पनि जारी राखे । २०३४ सालकै भदौ १ गतेदेखि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, जिल्ला समितिको नायब लेखापाल पदमा रहेर पनि स्व. श्रेष्ठले काम गरेका थिए ।
गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा काम गरे पछि २०३६ फागुण १ गतेदेखि जन जागृति व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय (हालको जन जागृति उच्च माध्यमिक विद्यालय) मा काम थालेका श्रेष्ठ २०६२ जेठ १ गतेसम्म त्यही कार्यरत रहे । त्यँहा उनी खुला प्रतिस्पर्धावाट छानिएका थिए । समग्रमा आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिउन्जेल र आँखाले भ्याउन्जेल स्व। श्रेष्ठ जन जागृति उच्च मा.वि.मा रहे ।
“तितेपाती र बनमाराले बनाएको घरमा पढाउँदा जुकाले बेस्सरी खान्थ्यो, तर पनि खै किन हो, त्यै पढाउनै मन लाग्ने त्यतीखेर” जिवित छँदा आफ्नै वृत्तान्त सुनाएका थिए श्रेष्ठले । पढाउने क्रममा नै उनी सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको विभिन्न गाउँमा पनि पुगेका थिए । ज्ञानको ज्योति बाड्नकै लागि सारा जीवन समर्पण गरेका स्व. श्रेष्ठले भने सल्लेरी रोसीका स्व. बिर्ख बस्नेत÷बिर्खे हवल्दार वाट शिक्षा लिएका थिए ।
२०२० साल तिरदेखि शिक्षा सम्बन्धी नै दर्जनौ तालिम, सेमिनारमा सहभागी भएका स्व। श्रेष्ठले २०२५ सालमा तत्कालिन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक प्रशिक्षण शाखा अन्तर्गत कलेज अफ एजुकेशन, प्राथमिक स्कूल शिक्षक शिक्षण विभागवाट शिक्षण तालिम उत्तीर्ण गरेका थिए । जुन त्यतिखेर जो सुकैले उत्तीर्ण गर्न सक्तैन थिए ।
आफ्नो जीवनमा हजारौंलाई ज्ञानको ज्योति प्रदान गरेका स्व. श्रेष्ठको स्मरणमा स्व. चन्द्रनारायण नन्दलक्ष्मी फाउण्डेशन सञ्चालन गर्न अहिले परिवार लागि परेकाछन् । सोलुखुम्बुको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ फाउण्डेशनको अवधारणा तयार भएको छ । फाउण्डेशन मा हालसम्म झण्डै ३ लाख ५० हजार रकम जम्मा भईसकेको छ र यो क्रम जारी पनि छ, रु. ५ लाखको कोष तयार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोलुखुम्बुको शैक्षिक विकास र स्व. श्रेष्ठको सम्मान स्वरुप सबैलाई सहयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेर स्व. श्रेष्ठको परिवारले सबैमा अर्को अमूल्य गुण लगाएको छ । भौतिक रुपमा सोलुखुम्बुको शैक्षिक इतिहास बनेको एउटा दीप निभे पनि फरक रुपमा त्यही दीप बाल्ने प्रयासमा जुटेका छन् परिवार । जीवन शिक्षामा नै बिताएका स्व। श्रेष्ठको नाममा स्थापना गरिन लागेको ट्रष्टवाट फेरी पनि बर्षेनी धेरैले शिक्षाको उज्यालो पाउनेछन्, यतिखेर यो आशा गर्न सकिन्छ ।
यसका लागी सन्चालक चन्द्र नारायण नन्दलक्ष्मी फाउण्डेशनको तर्फबाट ६० प्रतिशत र सहयोग सँकलन ४० प्रतिशत सँकलन गरि एक अक्षय कोषको स्थापना गरिने छ । तपाई पनि यस परोपकारी अभियानमा सहभागी बन्न चहानु हुन्छ भने स्वेच्छाले सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ । सहयोगी मनहरूको नामवली www.cnnenews.com मा प्रकाशित गर्दे जाने ट्रस्टले जानएको छ ।
जति सम्झे पनि थोरै लाग्छ
जति रोएँ पनि के पो रोएँ र
हाम्रा युगका हे साथी !
साथै हास्यौं साथै बाच्यौं
अझै अली बाँची दिए के पो हुन्थ्यो र!!!
लेखनः मनोज श्रेष्ठ